फायरफक्समा राख्न सकिने यो एडअनले वेबसाइटमा रखेका सबै खालका विज्ञापनको छुटि्ट गरिदिन्छ। एकपटक यो ब्राउजरमा राखिसकेपछि कुनै पनि वेबसाइटका इमेल, फ्रेम, फ्ल्यास भिडियो सबै खालको विज्ञापन देखिँदैन। यसको मदतले छानेर कुनै विज्ञापन विशेषलाई मात्र पनि निषेध गर्न सकिन्छ। यो एड अन राख्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
जाभा स्क्रिप्टमा आधारित यो एडअनले विभिन्न वेबसाइटमा देखिने विज्ञापनका अलाबा स्पाइवेयरबाट पनि जोगाउँछ। यो एड अन राख्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
← कम्प्युटरका लागि केहि महत्वपूर्ण सफ्टवेयरहरु !
रुघाले सतायो ? यसो गर्नुहोस् →